गभर्नर अधिकारीले भने-'दक्षिण एसियामा अब हामी साझा मुद्राको अवधारणामा जानुपर्छ'
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साझा मुद्राको अवधारणामा जानु पर्ने बताएका छन्। उनले दक्षिण एसियाको साझा मञ्चमा आफुले यो बारेमा प्रस्ताव गरेको बताउँदै केन्द्रीय बैंक डिजिटल...
bizmandu.com . ४५ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ ले भन्यो, देशका ३०० उद्योग धराशायी हुँदैछन्
विराटनगर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत जेठ १५ को बजेटले मर्कामा पारेका स्यानिटरी प्याड, वनस्पति तेल र एमएस वायर रडमा आधारित गरी तीन थरी उद्योगका समस्या समाधान नगरे देशका ३०० भन्दा बढी उद्योग धर...
bizmandu.com . २ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
महाप्रवन्धक सर्वोच्चको पेसीमा, त्यही भएर रोकियो एनएसीको काठमाडौं- बेग्लोंर उडान
काठमाडौं। विहीबार नेपाल वायुसेवा निगमको काठमाडौं-बेग्लोंर उडानको सबै तयारी पूरा भएको थियो। निगमले आफ्नो काउन्टरदेखि ट्राभल एजेन्सीमार्फत १३० यात्रुको टिकट काटिसकेको थियो। टिकट काटेर बेग्लोंर जाने ...
माछापुच्छ्रे बैंकले धादिङको सिम्लेमा खोल्यो शाखा, धादिङमा मात्रै बैंकको शाखा ४ पुग्यो
काठमाडौं। माछापुच्छ्रे बैंकले धादिङको सिम्लेमा नयाँ शाखा खोलेको छ। यो शाखासँगै धादिङमा मात्रै बैंकका चार वटा शाखा पुगेको छ। नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनका महासचिव विश्व अर्याल, थाक्रे गाउँपालि...
bizmandu.com . ३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं। विद्युत प्राधिकरणले अबको ६ महिना पछि काठमाडौंका विद्युतीय पोल हटाउन सुरु गर्ने भएको छ। विद्युतीय पोल हट्ने भएपछि त्यहाँ झुन्ड्याइएका इन्टरनेट, केबललगायतका तारहरु कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भ...
bizmandu.com . ४ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं। राष्ट्रियसभाबाट ‘रेल्वे विधेयक, २०७९’ पारित भएको छ। राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले प्रस्तुत गरेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ता...
मध्यपूर्वकै उत्कृष्ट तीस सेफमा नेपालका राहुल श्रेष्ठ, क्याटरर मिडल इस्टले गर्यो घोषणा
काठमाडौं। क्याटरर मिडल इस्टको ३० जना उत्कृष्ट फुड एण्ड वेभरेज प्रोफेसनलमा नेपालका राहुल बाबु श्रेष्ठ पर्न सफल भएका छन्। विभीन्न मुलुकमा क्याटरिङ सेवा अन्तर्गत फुड एण्ड वेभरेज सेवामा कार्यरत प्रतिभा...
एकसाता भित्रै आउँदै दूरसंचार पूर्वाधारको नियमावली: 'विद्युत प्राधिकरणले पनि लाइसेन्स लिन्छ'
काठमाडौं। सरकारले एक साता भित्रै दूरसंचारसम्बन्धी पूर्वाधार नियमावली ल्याउने भएको छ। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित इन्टरनेट सेवा विस्तारमा विद्युतीय पूर्वाधारको योगदान र चुनौती विषयक अन्तरक्रियामा ब...
जीवन विकास लघुवित्तको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत, ४२ लाख ५८ हजार कित्ता अब दोस्रो बजारमा
काठमाडौं। जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा शुक्रबार बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो। संस्थाको गत चैत २५ मा सम्पन्न तेस्रो वार्षिक सा...
बक्यौता रहेकाले भारतले तेल नदिने भन्यो: राज्यमन्त्री श्रेष्ठ, निगम भन्छ: 'हामीलाई भनेको छैन'
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानी नदिएको भन्दै भारतले तेल नदिने जानकारी गराएको बताएका छन्। काठमाडौंमा ...
bizmandu.com . ५ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
सानिमा बैंकले नेपालटारमा खोल्यो नयाँ शाखा, विश्वसनीय बैंक बनिरहन शुभकामना
काठमाडौं। सानिमा बैंकले नेपालटारमा नयाँ शाखा खोलेको छ। बैंकका ब्राण्ड प्रवर्द्धक वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र बैंककी संचालक गायत्री थापाले शाखाको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे। कलाकार श्रेष्ठले सब...
भारतमा पेट्रोलियम पदार्थमा निर्यात कर: नेपालले किन्दै आएको तेलको मूल्य प्रभावित नहुने
काठमाडौं। भारतमा सरकारले तेलको निर्यातमा थप कर लगाएपनि नेपालले किन्दै आएको तेलमा भने यसले कुनै प्रभाव नपार्ने आयल निगमले जनाएको छ। आजै भारतले तेलको निर्यातमा कर लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर यस करल...
फराकिलो वृद्धि लगत्तै बजारमा देखिने करेक्सनको प्रवृत्ति पुनः दोहोरियो, आगामी चाल बजार अनुरूप
काठमाडौं। सय अंकको वृद्धि लगत्तै बजारमा देखिने करेक्सनको प्रवृत्ति पुनः दोहोरिएको छ। अघिल्ला दुई दिनमा निरन्तर फराकिलो अंकले बढेको परिसूचक साताको अन्तिम कारोबार दिन भने सामान्य अंकले खुम्चिएको हो। ...
भर्जु-इन होटलमा प्रहरीको छापा : ४६ लाख स्रोत नखुलेको पैसासहित चिनियाँ नागरिक पक्राउ
काठमाडौं। पोखरा-१७ ड्यामसाइटस्थित भर्जु-इन होटेलबाट स्रोत नखुलेको रकमसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ। ४५ लाख ९७ हजार १ सय ८० रुपैयाँ नगदसहित ४ जनालाई बिहीबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको ह...
bizmandu.com . ६ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं। सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कार्यकारी अधिकृतमा रमेश घिमिरेलाई नियुक्त भएका छन्। सिफारिसमा परेका तीनमध्ये मन्त्रिपरिषद्को बैठकले झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका-२ का घिमिरेलाई नियु...
आइएमई नेपाल लोकस्टारको पावर बाइ स्पोन्सरमा जगदम्बा साइन जस्तापाता अनुवन्ध
काठमाडौं। नेपालको मौलिक लोक संगीतमा आधारित रियालिटी शो ‘आइएमई नेपाल लोकस्टार’ को दोस्रो सिजनको लागि पावर बाई स्पोन्सरका रुपमा जगदम्बा सुपर साइन जस्तापाता अनुवन्ध भएको छ। जगदम्बा स्टील्सका महाप्रबन...
bizmandu.com . ७ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमा शुल्क ८ प्रतिशतले वृद्धि, जेठ मसान्तसम्म उठाए १ खर्ब १९ अर्ब
काठमाडौं। जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमा शुल्क आर्जन गत वैशाखका तुलनामा जेठमा ८ प्रतिशतले बढेको छ। १९ कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब १९ अर्बभन्दा बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। बी...
सनरुफ भएको नयाँ सुजुकी ब्रेजा कम्प्याक्ट एसयूभी आयो, एक लिटर पेट्रोलले २० किमी माइलेज दिने दावी
काठमाडौं। मारुतीको २०२२ नयाँ सुजुकी ब्रेजा कम्प्याक्ट एसयूभी भारतमा सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त नयाँ सुजुकी ब्रेजामा ६-स्पिड अटोमेटिक गियरबक्समा पनि उपलब्ध रहेको छ। यसको मूल्य भारतमा भारु ७.९९ लाखदेख...
'अर्थमन्त्रीलाई हामी बहिस्कार गर्दैछौं' भन्दै जब राष्ट्रिय सभाबाट बाहिरिए एमाले सांसदहरु
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बहिष्कार गरेको छ। शुक्रवारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक विधेयक २०७९ माथि छलफल गरियो...
मर्जरमा नजाने निर्णय गरेको रिलायबल नेपालले संस्थापकबाटै पुँजीको शतप्रतिशत रकम उठाउने
काठमाडौं। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले संस्थापक सेयरधनीमार्फत हाल कायम चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशत रकम उठाउने भएको छ। इन्स्योरेन्सको सूचना अनुसार कायम सेयरधनीले आफ्नो लगानीको शतप्रतिशत रकम जम्मा ...
bizmandu.com . ८ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
असारे विकासमा लागेन ब्रेक, एकै दिन हुन थाल्यो १३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको भुक्तानी
काठमाडौं। आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारी भुक्तानी बढन थालेको छ। पछिल्लो समय एकै दिन १३ अर्ब १३ करोड भुक्तानी भएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार असार १६ गते ...
नबिल बैंकमा ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको इन्ट्री, राष्ट्र बैंक, एनसीसी, एनबि बैंकहुँदै नबिलको सिइओ
काठमाडौं। नबिल बैंकमा ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यभार सम्हालेका छन्। एनबि बैंक गाभिएपछि ढुंगानालाई नबिलमा ल्याउने संचालक समितिले निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णय अनुस...
सुनको भाउ तोलामा तीन सयले घट्यो, ९७ हजार दुई सय रुपैयाँमा कारोबार, चाँदी कति पुग्यो?
काठमाडौं। लगातार घटबढ भइरहेको सुनचाँदीको मूल्य साताको अन्तिम दिन घटेको छ। अघिल्लो दिनको भन्दा ३ सय रुपैयाँ घट्दा शुक्रबार सुन प्रतितोला ९७ हजार २ सय रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ...
१५ सय मेगावाट क्षमताका आरओआरको पीपीए खुल्दै, 'वास्तविक उत्पादकले मात्रै पाउँछन्'
काठमाडौं। सरकारले १५ सय मेगावाट विद्युत क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको बिद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गर्ने भएको छ।मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले १५ सय मेगावाट क्षमताका नद...
दुई वर्षपछि थाइ वायुसेवाको आजदेखि नेपाल उडान, थाइ स्माइलले साताको सातवटै उडान गर्ने
काठमाडौं। दुई वर्षपछि थाइ वायुसेवाको नेपाल उडान आजदेखि सुरु गरेको छ। कोभिड-१९का कारण बन्द रहेको उडान आजबाट पुनः सुरु हुन लागेको हो। यस अघि थाइ एयरवेजले गर्दै आएको उडान अब यही कम्पनीअन्तर्गत लो कस्ट...
सेयर खरिदबिक्रीमा हट्यो एओएन सेवा, टाठाबाठाले प्रयोग गर्ने फिचर हट्दा के हुन्छ फाइदा ?
काठमाडौं। धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा सेयर खरिदबिक्रीमा प्रयोग हुने 'अल अर नन' (एओएन) सेवा हटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले आउँदो सातादेखि कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली(टीएमएस)बाट एओएन फिचर हट...
चक्रपथ बिस्तारको निर्माण कार्य अघि बढ्यो, सर्भिस लेन र कल्भर्ट बनाउन ६७ करोडमा ठेक्का
काठमाडौं। चक्रपथ सुधार योजनाले चक्रपथ विस्तारमा निर्माण गरिने विधिन्न सर्भिस ट्रयाक र कल्भर्टको लागि ठेक्का लगाएको छ। उक्त ठेक्का पाउने निर्माण व्यवसायीहरुले चक्रपथमा रहेको स्वयम्भू गुम्बादेखि बिष...
bizmandu.com . ९ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
यात्रु बढेपछि हवाई कम्पनी जहाज थप्ने होडमा, सौर्यले चार, बुद्धले तीन र यतीले दुई एटीआर ल्याउँदै
काठमाडौं। यात्रुको चाप बढेपछि वायुसेवा कम्पनी जहाज थप्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। बुद्ध, यती, श्री, तारा लगायत वायुसेवा कम्पनीले क्षमता जहाज थप्दैछन्। बुद्ध एयरले अक्टोबर सम्ममा तीनवटा जहाज ल्याउने योज...
काठमाडौं महानगरले सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न रोक लगायो, भिक्षा मागे कारवाही
काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न रोक लगाएको छ। आज सूचना जारी गर्दै महानगरले सडक, गल्ली, पार्क, सवारी बिसौनी स्थल, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सवारीसाधन र अन्य सार...
२५ वर्ष पुगेको अवसरमा सिताराम गोकुल मिल्क्सले नयाँ प्याकमा ल्यायो घिउ
काठमाडौं। सिताराम गोकुल मिल्क्सले नयाँ प्याकिङमा घिउ ल्याएको छ। अत्याधुनिक प्रविधिबाट आकर्षक बट्टामा घिउ ल्याएको हो। केडिया अर्गनाइजेसनको भगिनी संस्थाको रुपमा स्थापना भएको यो उद्योग २५ वर्ष पुगेको...
११ महिनामा वीरगंजका दुई भन्सारको १ खर्ब ३३ अर्ब संकलन, एउटाले लक्ष्य भेट्दा अर्कोको अपुरो
वीरगंज। वीरगंजस्थित दुईवटा भन्सार कार्यालयमध्ये वीरगंज भन्सारले राजस्व लक्ष्य भेटेको छ भने सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । वीरगंज भन्सारले चालू आवको साउनदेखि जेठ महिन...
भारतमा बिजुली बेच्दा २८ दिनमा १ अर्ब ७२ करोड, नेपाली ऊर्जालाई औसत साढे ९ रुपैयाँ
काठमाडौं। इण्डियन एक्सचेन्ज मार्केटमा बिजुली बेचेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २८ दिनमा १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। १७८.२ गिगावाट आवर विद्युत बिक्री गरेर उक्त आम्दानी गरेको हो। प्राधिकर...
सिबिफिनले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा दियो सुझाव
काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा आफ्नो सुझाव दिएको छ। सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाल...
bizmandu.com . १० घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको ११ महिनाको बीमा शुल्क आर्जन ३४ अर्ब, कुन कम्पनीको कति ?
काठमाडौं। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३४ अर्बभन्दा बढी बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन्। बीमा समितिका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म २० कम्पनीले ३४ अर्ब १५ करोड रुप...
काठमाडौं। विद्युत विकास विभागले ९७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी-२ जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन तयार पारेको छ। विभागले उक्त प्रतिवेदन अहिले स्वीकृतिका लागि वन तथा वाता...
bizmandu.com . १४ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
आगामी वर्षका लागि क्यानले बनायो ४२ अर्बको बजेट, टिआइए स्तरोन्नतिमा १२ अर्ब खर्च गर्ने योजना
काठमाडौं। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भएको छ। यो रकम बराबरको बजेट शुक्रबार प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसेर यसलाई पास गर्ने तयारी रहेक...
bizmandu.com . २३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
पूर्वका व्यवसायीले भने- उद्योगका समस्या सरकारलाई सुनाउन सडक नै रोज्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद
विराटनगर। उद्योगवाणिज्य क्षेत्रका अगुवाहरुले व्यवसायीले आफ्ना कुरा सरकारलाई सुनाउन सडक नै रोज्नुपर्ने दुःखद स्थिति उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ को चौथ...
शेखर गोल्छाले भने- 'अर्थतन्त्रको अवस्था गम्भीर छ, राष्ट्र बैंकले कठोर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ'
विराटनगर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राष्ट्र बैंकले कठोर भएर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेकाले केन्द्रिय बैंकले अब आउने म...
bizmandu.com . १ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं। सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले व्यतित बीमालेखमा छुट दिने भएको छ। समयमा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न नसकेका जीवन बीमालेखको शुल्क तिर्दा ग्राहकलाई ३५ प्रतिशत छुट दिने कम्पनीले जनाएको छ। कम्प...